FAQ -2- Learn to Speak English Online
မေး....ဆရာ delivery /နဲ့catering / logistic ကဘယ်လိုကွာပါသလည်းဆရာလော်ရီကားအကြီးစားတွေကကွန်တိန်နာတွေမှာ logistic လို့ရေးထားပါတယ်ဆရာ
​ဖြေ.....Delivery ဆိုတာက ..သာမာန်ပို့ဆောင်တာ ( ဥပမာ...စားသောက်ဆိုင်က စားစရာပစ္စည်းတွေကို စားသုံးသူများဆီ လိုက်လံပို့ဆောင်တာမျိုး )....Logistic ဆိုတာက လုပ်ငန်းတစ်ရပ်အတွက် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်တာ ( ဥပမာ ...စီမံကိန်းကြီးတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်တာမျိုး )...Cater ဆိုတာက ..လိုအပ်တာကိုဖြည့်ဆီးဘို့ လိုက်လံလုပ်ဆောင်ပေးတာ ( ဥပမာ..ဧည့်ခံပွဲတွေမှာ လိုအပ်တာကိုလိုက်လံဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့သဘော )။
မေး….ဆရာ Despite ကို preposition လို့သိထားပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့် အခုလို Despite ofသုံးတာလဲ သိချင်ပါတယ် ရှင့်။​(A large number of ladies, both from this City and abroad, who had come out,despite of the driving rain-storm, were in attendance, and occupied seats in the galleries.)ကျေးဇူးတင်လျှက်
​ဖြေ………တိကျတဲ့အခြေနေတစ်ရပ်မှာ အသုံးပြုတတ်ပါတယ်။ အင်မတန်မှရှားပါတယ်။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနဲ့ မညီပါဘူး။ English Language Learners Beta မှာ ဒီလိုရှင်းပေးထားပါတယ်။You may notice that in all the above examples, "despite" has not been used with "of" but it can definitely be used in certain contexts such as this:A large number of ladies, both from this City and abroad, who had come out, despite of the driving rain-storm, were in attendance, and occupied seats in the galleries.(However, the 'despite of' usage is not illegal, though it is fairly rare. )
​မေး.....Figure out ဆိုတဲ့အသုံးကိုမေးထားပါတယ်။
​ဖြေ....အားလုံးသတိထားနိုင်အောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ အကြောင်းအရာတစ်ခုမှာကိုယ်သိထားတဲ့ ဝေါဟာရကိုအသုံးပြုပြီး စာကြောင်း ( သို့ ) စကားကိုတွေ့လိုက်ပြီဆိုပါစို့..ဥပမာ ( I will try to figure him out. )...ဝေါဟာရတွေကို အကုန်သိတယ်..ဘာသာပြန်လို့မရတော့ဘူး...။ကိုယ်က ဝေါဟာရတစ်ခုကို..ကျက်မှတ်ရာမှာ အလွတ်ကျက်..တစ်ခုဆို..တစ်ခုပဲသိထားတယ်။ figure ( Noun )..ပုံပန်းသဏ္ဍန်ကိန်းဂဏန်း စသဖြင့်ပေါ့...အဲဒီတော့ ခပ်တည်တည်ပဲဘာသာပြန်ပစ်လိုက်တယ်။( သူ့ရဲ့ပုံပန်းသဏ္ဍန်လို ဖြစ်ဖို့ကျနော်ကြိုးစားရလိမ့်မယ်....တဲ့ )..လွဲပြီ..။ တက်တက်စင်အောင်လွဲပြီ...။ မှားလို့ အပစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်..ဆင်ခြင်နိုင်အောင်လို့...တကယ်က figure out ဆိုတာ ( Phrasal Verb ) အသုံး..နားလည်သည် ၊ သဘောပေါက်သည် ( Understand ) နဲ့အတူတူပဲ။ တကယ့်အဓိပ္ပါယ်အစစ်အမှန်က( သူ့ကို နားလည်ဖို့ ကြိုးစားရလိမ့်မယ် ) ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့...စာကြောင်းတစ်ကြောင်းမှာ ဝေါဟာရတွေအားလုံးကိုသိထားပေမဲ့ဘာသာပြန်လို့မရဘူးဆို ( ၁ ) phrasal verb ( ၂ ) idiom ( ၃ ) slang တစ်ခုခုဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။သိထားတဲ့ဝေါဟာရနဲ့ ရောမကြိတ်ပါနဲ့...လွဲတတ်တယ်။နောက်တစ်ခုက....figure out နဲ့ understand ဘာကွာပါသလဲဆိုရင်...figure out ဆိုတာကphrasal verb ဖြစ်ပြီး..understand ဆိုတာက word ဖြစ်ပါတယ်။
မေး....တစ်ချို့တွေပြောနေကြတဲ့ Carpool Zone ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲ ဆရာ။
​ဖြေ......အထူးသဖြင့်..အဝေးပြေးလမ်း ( သို့ ) နေရာတစ်ချို့မှာ ကားပေါ်ပါရှိသူ နှစ်ယောက်နဲ့ အထက်အတွက် သီးခြားပေးထားတဲ့ အစွန်ဆုံးလမ်းကိုဆိုလိုပါတယ်.....။တစ်ယောက်ထဲမောင်းမယ်ဆို..အဲဒီလမ်း ( Lane ) ကမောင်းလို့မရပါဘူး။
​မေး..........Sick နဲ့ Ill ရဲ့ အသုံးကွဲပြားပုံ
​ဖြေ...နှစ်ခုလုံးက ( ဖျားနာတာကိုပဲသုံးတယ် )။Sick နဲ့ Ill မှာ ခြားနားမူ့တွေရှိတယ်.....Sick ဆိုတာကို သာမာန်ဖျားနားမူ့တွေမှာသုံးတယ် ( informal ) ဆန်တယ်...ဥပမာ..တုတ်ကွေး လို...ချောင်းဆိုးတာလို......။Ill ကို ရေတို ရေရှည် ဖျားနားမူ့တွေမှာသုံးတယ်..( Formal ) ဖြစ်တယ်....။ ကင်ဆာရောဂါဖြစ်နေတာကို...sick လို့မသုံးဘူး။ Ill လို့သုံးရတယ်။